Ihe ọkụkụ igbe Suppliers na Factory - China Planter igbe Nsuputa
Igbe osisi igwe anaghị agba nchara nkecha
Ihe ịchọ mma ime ụlọ nke oge a: igbe ite ifuru akụkụ anọ nke ejiji na-egosi ụdị ịchọ mma ya.Dị mfe ma mara mma.Nke a dị ntakịrị atụmatụ na-egosipụta mkpuchi ntụ ntụ matte ojii maka nhicha dị mfe.Usoro a na-eguzogide ntu, irighiri ihe na ngbanwe.
l imewe: igbe igbe ifuru akụkụ anọ pere mpe.
l Size dị: 16" x 3.2" x 3.5" 16" x 8" x 3.5" 32" x 3.25" x 3.5" ma ọ bụ ahaziri.
l imecha: inogide uzuzu mkpuchi matte ojii.
l Logo: Akara aha ahaziri dị.
l Agba: Black ma ọ bụ ahaziri agba.
l Nkwakọ ngwaahịa: nkwakọ ngwaahịa nchekwa, nkwakọ ngwaahịa agba aja aja, igbe agba agba ma ọ bụ nkwakọ ngwaahịa ahaziri.
l oge nlele: 5-7 ụbọchị.Anyị ga-ebugharị usoro ahụ site n'oge ruo n'oge.
l Production oge: Nọmalị 15-20 ụbọchị.Mmepụta oge bụ negotiable.
l Mbupu: site na ikuku, n'oké osimiri na ụgbọ oloko.
l FOB ọdụ ụgbọ mmiri: ọdụ ụgbọ mmiri Guangzhou / ọdụ ụgbọ mmiri Shenzhen.
l Usoro ịkwụ ụgwọ: TT/Paypal/Western Union ma ọ bụ nkwekọrịta nkwekọrịta.
l Ogo: nke igwe anaghị agba nchara 304 na-adịgide adịgide, nsọtụ nke nnukwu ite ifuru a bụ akwa welded iji hụ na ite ifuru gị dị warara enweghị mmiri.N'iji ọkpụrụkpụ nke 1.5mm, ị nwere ike ịhụ ịdị mma na ịdịte aka nke ite ifuru a.100% mma nyocha tupu mbupu iji hụ na ebufe ihe ọ bụla n'ọnọdụ dị mma.
l Zụrụ ya: Ụzọ dị mma isi webata n'èzí n'ime oghere gị.Zuru oke maka itolite succulents, ahịhịa na obere osisi.
l Modern Industrial Style: dabara na ihe ndozi ụlọ ọ bụla nwere ụdị dị mfe na ihe igwe anaghị agba nchara.
l Ihe pụrụ iche: Gụnyere 4 obere profaịlụ roba paịlị - Ọ dị mfe ịwụnye, na-enye nkwụsi ike ka ukwuu, ma na-echebe onye na-akụ osisi na elu nke ị na-etinye ya.
l N'ime usoro ihe ubi nke ụlọ: Too ahịhịa ọhụrụ & veggies n'afọ niile n'ogige ahịhịa ime ụlọ;Dị ọhụrụ mgbe niile, mgbe niile na mpaghara, mgbe niile na oge.
l OEM & ODM: Anyị na-eme ihe niile ahaziri metal ngwaahịa, nakwa anyị ọkachamara imewe otu nwere ike ịmepụta aghụghọ dị ka ndị ahịa 'echiche.
Igbe ihe ọkụkụ akụkụ anọ nke oge a
l oge nlele: 5-7 ụbọchị.
l A na-ejikarị eme ihe: Enwere ike iji igbe ihe ọkụkụ windowsill mee ihe n'ụzọ dị iche iche.Ọ nwere ike ịbụ ebe etiti mara mma maka tebụl iri nri gị ma ọ bụ na akwa akwụkwọ gị.Ọ nwere ike ijide obere osisi dị iche iche dị ka cactus, succulents, okooko osisi, na ọtụtụ osisi ndị ọzọ dị ndụ.Ngwaahịa anyị abụghị naanị ijide osisi ime ụlọ, ị nwere ike iji ya jide kandụl, ihe ndozi ime ụlọ ịwụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.O zuru oke maka mkpa imewe ime ụlọ ọ bụla.
OEM & ODM: Anyị na-eme ka niile ahaziri metal ngwaahịa.Anyị nwere ọkachamara imewe otu ndị nwere ike ịmepụta aghụghọ dị ka ndị ahịa 'echiche.Naanị mee ka anyị mara ma ị nwere echiche ọ bụla n'uche gị.Anyị ga-eme ka echiche gị mezuo.
l Banyere anyị: Ọrụ anyị bụ LASER CUTTING.Anyị na-arụpụta ụdị ngwaahịa ọla ọ bụla.SHENGRUI na-enye ngwaahịa dị elu yana ọrụ ọrịre ahịa nke ọma.Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ngwaahịa anyị, biko kpọtụrụ anyị.Anyị ga-enye gị ngwọta ozugbo enwere ike.
Contemporary imewe ubi osisi
Igbe ihe ọkụkụ dị mfe mana mara mma na-eme nkwupụta ịchọ mma n'onwe ya.Gụnyere oghere igbapu - gụnyere saucer enweghị nkebi.Gụnye ụgbụ olulu mmiri - tinye n'ime iji kpuchie oghere mmiri ahụ iji gbochie ala ịpụ n'ime oghere mmiri ahụ mgbe ị na-ekwe ka mmiri na-agbapụta ma na-edebe ala ikuku iji kwalite uto osisi.
Ngosipụta njide olu, Osisi ite Hangers, Nko njide igodo, Igwe mgbidi ọla, Onye nhazi nko igodo, Mgbodo osisi nkwudo mgbidi,